Mari inotaura: London Heathrow inoda vachengeti Vapfuuri vafambe zvakare
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Mari inotaura: London Heathrow inoda vachengeti Vapfuuri vafambe zvakare
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
FRAPORT inoshanda Frankfurt Airport, Amsterdam Schiphol iri kusimuka zvishoma nezvishoma, asi London Heathrow inoramba iri pasi. Heathrow manejimendi anoda kuvhura zororo uye bhizinesi kufamba kuenda kuUK kune vaccinent vafambi.
London Heathrow airport inoda kuti vachengeti vafambe kuti vabhururuke zvakare kuburikidza neiyi London hub airport
Heathrow mari inoramba yakashinga, kunyangwe nekurasikirwa kuri kukura - Kurasikirwa kwekuwedzera kubva ku COVID-19 kwakura kusvika pa £ 2.9bn.
London Heathrow yakadyarwa muazvino COVID-19 matekinoroji akachengeteka uye maitiro ekuzadzisa iyo Skytrax 4 * chiyero, chepamusoro-soro chinowanikwa neUK airport.
Vakuru veLondon Airport vanonongedzera kuti nhandare inoramba ichiraira kufukidza kumeso asi vari kuti Britain iri kurasikirwa nemari yekushanya uye kutengeserana nevakakosha hupfumi vakaita seEU neUS nekuti maMinister anoramba achirambidza kufamba kwevatakuri vakabaiwa jekiseni kunze kweUK. Nzira dzekutengeserana pakati peEU neUS dzakadzoreredza kusvika pamakumi mashanu muzana ezviuru zvepamberi pechirwere uku UK ichiramba iri 50% pasi.
Passenger inoda kuwedzera kubva kubva munhoroondo, asi zvirambidzo zvekufamba zvinoramba zviri chipingamupinyi - Vashoma vanopfuura mamirioni mana vanhu vakafamba kuburikidza neHeathrow mumwedzi mitanhatu yekutanga ya4, danho raizodai rakangotora mazuva gumi nemasere kuti vasvike muna 2021. Shanduro dzichangoburwa kuhurongwa hwemigwagwa yeHurumende inokurudzira, asi zvinodhura zvekuyedza zvinodiwa uye zvirambidzo zvekufamba Kubata kudzoreredza kwehupfumi kweUK uye aigona kuona Heathrow achigamuchira vashoma vafambi muna 18 kupfuura muna 2019.
UK iri kudonha kumashure sezvo vakwikwidzi veEuropean vanobata mukana wehupfumi - Cargo vhoriyamu kuHeathrow, chiteshi chikuru cheBritain, chinoramba chiri 18% pasi pamatanho epamberi pechirwere, nepo Frankfurt neSchiphol vakwira ne9%.
Rutsigiro rwemari runofanirwa kuve uripo sekureba sekurambidzwa kuchiramba pakufamba - Kufamba ikozvino ndiyo yega chikamu chakatarisana nezvirambidzo, uye kwenguva yakareba sezvazviri, maMinister anofanira kupa rutsigiro rwemari kusanganisira kuwedzera kune furlough scheme uye bhizinesi reti zororo. Heathrow anobhadhara angangoita mamirioni zana nemakumi mapfumbamwe emadhora pagore mumitengo, zvisinei nekuita kurasikirwa-kuita; Hurumende iri kuchinja mutemo kutitadzisa kutora mari yekubhadhara zvakawandisa uye tiri kupokana nazvo muHigh Court.
UK Hurumende iri kuratidza hutungamiriri hwepasirese nekutakura kwayo kutakura hurongwa - Tinogamuchira hurumende yeUK jet zero aviation strategy, inoratidza kuti kukura kwendege kunoenderana nekuwana hutachiona husina kukwana mugore ra2050. Isuwo tinogamuchira mvumo yekuda kuwedzera kushandiswa kweSustainable Aviation Fuel (SAF); pamwe chete neSAF mutengo wekudzikama mashandiro, izvi zvinogona kukurudzira kuwedzera kukuru mukugadzirwa kweSAF, kugadzira mabasa muUK.
Ndege dzeHeathrow dziri kutungamira pakusarudza kwendege - Ndege dzaHeathrow dzakatozvipira kushandisa danho repamusoro reSAF na2030 kupfuura iri muKomiti yezveMamiriro ekunze Inotarisira zvakanyanya. Isu nguva pfupi yadarika takagamuchira kutumira kwedu kwekutanga kweSAF, humbowo hwakakosha hwepfungwa yekusanganisa SAF neparafini panhandare huru yepasi rose.
Mutungamiri weHeathrow John Holland-Kaye akati:
"UK iri kubuda kubva mukukuvara kwakanyanya kwedenda rehutano asi iri kusarira shure kwevaikwikwidzana navo veEU mukutengeserana nedzimwe nyika nekunonoka kubvisa zvirambidzo. Kutsiva bvunzo dzePCR nekuyedza kuyerera kwekupedzisira uye kuvhurira EU neUS vafambi vakabaiwa majekiseni pakupera kwaChikunguru zvichatanga kudzora hupfumi hweBritain pasi. "